Beesha Caalamka oo walaac ka muujisey saameynta fayraska Corona ee Soomaaliya – Geelle Magazine
Beesha Caalamka oo walaac ka muujisey saameynta fayraska Corona ee Soomaaliya
caliahmed Posted On April 23, 2020
Qaramada Midoobay iyo Hay’adaha kale ee Saaxiibbada la ah Soomaaliya ayaa waxa ay maanta daaha ka rogeen qorshaha u diyaar-garowga iyo Ka falcelinta Cudurka Covid-19 ee Soomaaliya si loola tacaalo saameynta bani’aadannimo iyo midda dhaqan dhaqaale ee uu keenay fayraska Corona.
Qorshahan oo loogu tala galay in loogu howlgalo lix ilaa sagaal bilood gudahood, wuxuu u fududeynayaa hay’adaha samafalka iyo kuwa horumarintaba inay dib u eegaan mashaariicdooda, lana jaanqaadaan xaaladaha is bedbedalaaya iyo weliba in ay sara u qaadaan howlaha ay hayaan si loo yareeyo saameynta Cudurka COVID-19 ee Soomaaliya.
Ujeeddadu waa inay is dhameystiraan gargaarnka samalka ah, mashaariicda horumarinta iyo dhismaha nabadda.
Qorshahan fulintiisa wuxuu dhameystirayaa qorshayaasha Dowladda Soomaaliyeed ay uga jawaabeyso faafitaanka Fayraska Corona.
“Saameynta Coronavirus waa mid aad u daran, Ahmiyadda koowaad waxay tahay in laga taxaddaro in xanuunku uu u faafo si xad dhaaf ah, iyadoo loo marayo in qatarta cudurkani leeyahay dadka loo sheego, dadkana laga baaro xanuunka iyo weliba in dabaggal lagu sameeyo dadka la macaamilay qof xanuunkan lugu arkay.” ayuu yiri Mr. Adam Abdelmoula, oo ah Ku xigeenka Wakiilka Xoghayaha Guud ahna Isku dubbaridaha Arrimaha Bani’aadamnimada ee Soomaaliya.
Mr. Adam wuxuu intaasi kusii daray, “Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa Dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo saaxiibbada kaleba si mashaakilkan aan horay loo arkin loola tacaalo, waxaan ugu yeerayaa deeq bixiyaasha inay taageeraan qorshahan, soona dedejiyaan kaalmadooda si hay’adaha samafalka ay ugu suurtagasho inay sara u qaadaan gurmadka ku aaddan xanuunka COVID-19.”
Coronavirus oo saameyn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya